Dowladda Qadar oo si adag uga hadashay qaraxii ka dhacay Shabeellaha Hoose + Cambaareyn Kulul | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Qadar oo si adag uga hadashay qaraxii ka dhacay Shabeellaha Hoose...
Dowladda Qadar oo si adag uga hadashay qaraxii ka dhacay Shabeellaha Hoose + Cambaareyn Kulul
Dooxa (Halqaran.com) – War ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Qadar ayaa lagu cambaareeyay qarax miino oo Arbacadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose.
Lix askari oo ka tirsan ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa ku dhintay kabdib markii qarax miino lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidanka xoogga dalka oo mareysay Afgooye oo 30 kilometer u jirta magaalada Muqdisho.
Dowladda Qadar ayaa u tacsiyeeysay ehelada askartii ku dhimatay qaraxa wax ayna caafimaad degdeg ah u rajeysay askartii dhaawacyadu soo gaareen.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa fashiliyay weerar ay ururka al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ciidanka cirka Soomaaliya ee Balidoogle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Toban dagaalyahan oo ka tirsan ururka Shabaab ayaa lagu dilay duqeymo ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen gobolka Shabeelaha Hoose wax yar uun kaddib dhacdadaa.
Qaraxii shabeellaha hoose
si kulul u cambaareysay